Business Essentials Main Page | AIM Mandalay Myanmar
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ မရှိမဖြစ်သိထား လေ့လာထားသင့်သော အခြေခံအချက်အလက်များကို သေချာ စနစ်တကျ သိရှိနားလည်စေပြီး နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Level3(ABE, UK) ဒီပလိုမာလက်မှတ်ကို ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာ ရယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Chapter1 The Nature of Business
Chapter2 Key Processes and Resources in Business
Chapter3 Demonstrating Your Employability
Chapter4 The Skills Needed for Successfully Working in Business
Traditional လုပ်ငန်းပုံစံမှ စနစ်ကျသော ယနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းပုံစံသို့ ပြောင်းလဲလိုသော SMEs Owner များ
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်တော့မည့် လုပ်ငန်းရှင်များ
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာလက်မှတ်ကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ ရယူလိုသူများ
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Foundation Diploma မှတဆင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဘွဲ့အတန်းကို တက်ရောက်လိုသူများ
Why Certificate in Business Essential (ABE-UK) @ AIM?
A.B.E (UK) ၏ ကမ္ဘာအမှတ်အများဆုံးဆုရှင်လည်းဖြစ်၊ A.B.E (UK) မှချီးမြှင့်သော Honorable Fellowship Award ရရှိထားသော ဆရာမ ဒေါ်မြတ်မွန်ဇော် MBA (International Business Management, PGSM-France), Registered Business Analyst (AAFM-USA) BC Tech (UCSY), Adv. DBA, Dip HRM, Dip Mktg, Dip FM (ABE-UK) ကိုယ်တိုင် ဦးစီးသင်ကြားသောကျောင်းဖြစ်ခြင်း။